शब्दकोश: नारायणहिटीका नारायण र बाँकी तेत्तिस कोटि भगवान्
टिकटिक घडीको शिखर आरोहण झन्-झन् चुलिँदो छ, मानिसहरूको अनुहारमा कतै भय छ कतै कौतूहलको धुवाँ रङमङिएको छ । देशभित्र दशाको रुप बदलिएको मात्र छ, ठोस अवतरण हुन सकेको छैन । जनता नेताजीका पछि अनवरत् लागिरहे तर यिनै नेताजी भने 'आफू कसको पछि लागूँ प्रभु' भन्ने मनोदशाले ग्रस्त छन् । नेतालाई पनि महानेता चाहिएको छ । यस्ता नेतृत्वगुम नेताजीका हातमा राष्ट्रिय सर्कसघरको जोखिमपूर्ण सञ्चालन थामिनुपरेको छ । र, हामीले केही होला भन्ने अपेक्षा गर्नु रमिताको लाजमर्दो सिलसिला भइरहेको छ । यस्तैमा चैतको २८ को जग पार गरेर टेकिन आउनेछ जेठ १५ को ऐतिहासिक बैठक, संविधानसभाको । त्यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका ६०१ कुर्सी मात्र ताता बन्नेछन् कि अरु केही पनि हुनेछ, यसै भर गरेर भन्न सकिँदैन ।
सत्ताको खेलमा कस्तै पिलन्धरे वीर र गौप्राणी पनि उखरमाउलो खेलाडी भएर समयको चेपबाट फुत्त मैदानमा देखा पर्छन् । एक हिसाबमा उनीहरूलाई चिठ्ठा पर्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले 'छप्पर फाडके' त्यही विरासत हात पारे । ज्ञानेन्द्रपछि फेरि अर्को कुन कर्मेन्द्र वा टपेन्द्रले गोलपोस्ट छेड्नेछ, हामी त तिनको एउटा-एउटा विजयमा खोइ कुन उल्लासले ताली पिट्ने न हो । हामीले बिस्तारै तालिम प्राप्त गर्दै आयौँ, जोर जबर्जस्ती दबाब र अन्धो आन्दोलनले नै थपक्क अधिकार हत्केलामा आउँछ । सोझो औँलाले घिउ त के, घिउमा लागेको कमिला पनि आउँदैन । बिग्रिएको संस्कार मूलधार बनेर बस्न थाल्यो राजनीतिको उचाइविन्दुदेखि नै । यस्तो शिक्षाप्रणाली राज्य भनिन लायकको दायराभित्र कहिले आउने हो, भगवान् भरोसा !
भगवान् भरोसा त भनियो, तर एउटा भगवान् भए पो ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । भगवानै भगवान्‌को भेलबाढीमा कहाँ-कता तानातानी होला र कत्तिको छरपस्ट होला, केही भर छैन । नारायणहिटीमा गजक्क परेर बसका एउटा नारायणलाई 'ल सिट खाली' भन्ने सिग्नल देखाएर उठाए पनि जिल्ला-जिल्लाबाट जनपखेटामार्फत उड्दै केन्द्रमा बास बस्न आइपुगेका अरु छोटे नारायणहरूलाई के गर्ने ? कसले सिट खाली भनेर उठाउने ? आफैँ उठ्नलाई यी तेत्तिसकोटी टाउकाहरूको आफ्नै ढाड छ त ? अनि आपसी अविश्वासको राजनीति गरेर यिनले के लछारपाटो लगाउलान् ? दलीय अराजकता र निरङ्कुशतालाई सेलाउन अर्को राजाले फेरि पागलपन देखाउनैपर्ने हो ? यस्ता खुलदुलीमा हामीले पनि टाउको दुखायौँ भने अरु कसैलाई नोक्सान/नाफाभन्दा पनि हामी आफैँले छिपछिपे भए पनि जवाफ पाउँछौँ कि ? गहिरिएर हेरौँ है त !